१७ बर्षिया बिष्णुमायाकाे सपना टुट्यो ! आमालाइ बचाउन सकिनन्, यति धेरै रोइन्, यो कस्तो भाग्य दैव?-भिडियो सहित - सुदुर नेपाल
१७ बर्षिया बिष्णुमायाकाे सपना टुट्यो ! आमालाइ बचाउन सकिनन्, यति धेरै रोइन्, यो कस्तो भाग्य दैव?-भिडियो सहित
आमा अस्पतालको बेडमा जिवनसंग लडिरहेकी, बुवा पनि अस्वस्थ्य । आमा र बुवा क्यान्सर पीडित भएपछि एक जना १७ वर्षकी बालिकाको अवस्था के भयो होला ? आमाबुवाको काखमा लुटुपुटु गर्ने बेलामा आमाबुवाको जिवन बचाउन संघर्ष गरेकी विष्णुमाया लो को जिवनमा विहिवार नसोचेको वज्रपात भयो । उनले एक दिन अघि मात्र सामाजिक सञ्जालमा रुँदै आफ्नो आमाबुवालाई बचाईदिन अपिल गरेकी थिइन् । तर विहिवार भने उनको आमाले संसार छाडिन् ।
किशोरीले रुँदै सामाजिक सञ्जालमा सहयोगको याचना गरेपछि उनका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन अभियान सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भाग्य न्यौपाने मार्फत आर्थिक संकलन हुन सुरु भएको थियो ।
विष्णुमायाको बुवाको घाँटीको क्यान्सर भएको हो। उनको श्वर बसको थियो सुरुमा । सेकाएपछि घाउ भयो । उनको आमाको पनि घाँटीमै क्यान्सर भएको हो । बुवाको भन्दा आमाको अवस्था नाजुक भएको थियो । छोरा १२ कक्षामा पढ्छन् आमाबुवाको उपचारको लागि रिक्सा चलाएर हिड्छन् । छोरीले अस्पतालमा रेखदेख गरिरहेकी छन् ।
अघिल्लो दिन विष्णुमायाको भिडियो हेरे पछि आर्थिक संकलन गरेर पैसा लिएर अर्को दिन अस्पताल जाँदा उनको आमाले संसार छोडिसकेकी थिइन् । विष्णुमाया आमाको वियोगमा डाँको छोडेर रोएकी थिइन् । उनलाई आर्थिक सहयोग गर्न भन्दै गएका भाग्यले विष्णुमायालाई सम्हाल्न पर्ने भयो । विष्णुमायालाई परेको पीडामा उनी सहभागी भए । सम्झाउन थाले । आमाले संसार छोडेपनि अब पनि उनको जिम्मेवारी पुरा भएको छैन । बुवालाई पनि निको बनाउनुपर्ने दायित्व छ ।
उनी दुई वर्ष देखि नै अस्पतालमा बस्न थालेकी हुन् । सुरुमा बुवालाई उपचार गराउन अस्पतालमा बस्न थालेकी उनी फेरी आमालाई पनि रोग देखिएपछि अस्पताल बस्ने क्रम निरन्तर भयो । अस्पतालको एउटा बेडमा आमा र अर्को बेडमा बुवा १७ वर्षको किशोरीले त्यो अवस्थाको सामना गरिरहेकी थिइन् ।
Previous Post: छोरीलाई बाबुले मोबाइलमा नराम्रो भिडियो देखाउदै गरे करणी-भिडियो सहित
Next Post: सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाज जापानको अधिवेशन फ्रेबुअरी’२३ मा हुने